SomaliNet Magazine: JULAAY 2002
Qaybihii hore waxaan soo bandhignay danbiyada waaweyn: Shirkiga, in uu qofku qof dilo, sixirka iyo salaadda oo laga tago, Zakada oo aan la bixin, Bisha ramadaan oo sabab la?aan la afuro iyo qofka oo aan xajiyin isaga oo awooda.
Danbiga 8aad: Waalidka oo lagu C
ARIMAHA BULSHADA - BASAR XUMIDAA MA SOOMAALI BAAD TAHAY
Bisadda ama Mukulaasha ama yaanyuurta ama yaawda ama bista kolba kaad doonto ugu yeeroo sifooyin badan bay xayawaanka eebe abuuray kaga duwan tahay kuna caan baxday. Maxaad oran lahayd haddii sifooyinka qaarkood aadane la wadaaga dunida laga helay... oo waa kuma?? adiguba garo marka aad she
TAARIIKHDA - DAGAALKII SOOMAALIYA IYO ETHIOPIA ( 1977 )
Madaxdii Soomaalida waxaa ay guddoonsadeen in ay marka hore
culeyska Saaraan Jabuuti, waayo waxaa fadhiyey gumeysi reer Yurub ah (Faransiis), taas ayaana sababeysa in ay gacan kaga helaan dowladaha Afrika iyo caalamka
DHAQANKA - XAQ-DHAWRKA HADALKA
Inkasta oo uu golaha reer guuraagu uu ahaa madal u furan bulshada reer miyiga ah, misana nin kasta geedka kama uusan hadli jirin. Rag baa jiray hadalka iska lahaa, kuwaas oo ahaa rag bulshada ka tilmaaman oo aqoon, hadal aqood iyo caddaalad lagu qaddariyo. Bulshada xoolo-dhaqatada ah, ceeb uma
Qaybihii hore waxaa la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddibna markii ay arkeen in uu madow yahay (u ekayn aabihiis iyo hooyadiis midna) ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay odayga 60 jir
FANKA IYO SUUGAANTA - ALLA MA IYADIIBAA, ALLA MA ISAGII BAA?
Ahmed oo aan waligii la siin waqti lagu yiraa maxaad cunaysaa, waxa la cuno oo uu miyiga ku haystayna ay ahayd, cad iyo caano iyo bariis. Lakiin maanta waxa uu maqlayaa arrimo kale oo uunan waligii maqli jirin, maxaad cunaysaaaaaaaa?
Haddaba isaga oo wali
FIKRADAHA AKHRISTAYAASHA - YAA DAGAAL OOGE AH? DOOD FURAN
Waxaan u mahad celinaynaa dadkii noo soo diray fikardahooda. Waa kuwan qayb ka mid ah fikradihii ay akhristayaashu noo soo direen
Dagaal ooge waxaa ah shacabka Soomaaliyeed ee muddo 10 sano ka badan la kala saftay dad aan meel ay ummadda u wadaan la
FANKA IYO SUUGAANTA - GABAY
Gabaygaan soo socda waxaa tiriyey abwaankii caanka ahaa ee Cali Jamac Haabiil (allaha u naxariisto). Gabaygaani waxa uu ka mid yahay gabayo badan oo Cali Jamac uu u tiriyey Sayid Maxamed Cabdille Xassan.
Indhaweydba waataanan tirin taawadii gabaye
Ta\_'da niman aqoonnin
Talooyinkii Bishii Juun:
Waxaan u mahad celinaynaa dadkii fikradohooda noo soo diray. Waa kuwaan qayb ka mid ah talooyinkii ay dadku noo soo direen iyaga oo la talinaya gabadhii ina soo waydiisay in ay sawirkeeda u dirto wiil ay internetka ka bara
ARRIMAHA BULSHADA - DUMARKA SOOMALIYED MA U BAAHAN YIHIIN INAY IS CAATEEYAAN?
Waa wax u baahan in la is weydiiyo in dumarka Soomaliyed ay u baahan yahiin iney iscaateyaan! Caato raadiskaan oo ah wax aan hore looga aqoon Dalkeennii Soomaliya iyo qaaradda Afrika inteeda badan waxaa uu nagu soo biiray soo haajirkii qurbaha markii uu bilowday waa bur-burkii ka dib ta
SIYAASADA - MA LOO BAAHAN YAHAY SYL XILLIGAAN
Galab casarkii ah anigoo fadhiya makhaayad shaaha laga cabo oo ku taal galbeedka magaalada Moosko ee cariga Ruushka ayaa mar kaliya waxaan arkay dadkii makhaayadda shaaha ka cabayey oo mar qura wada istaagay hadalkiina joojiyey, intaan yaabay ayaan dhinacayada dhugtay bal si aan u xaqiiqsado waxa dh
MA OGTAHAY - INS
In hay?adda Socdaalka ee dalka Maraykanku (INS) ay tahay hay?adaha Dowladda Maraykanka midda ugu wayn. Shaqaalaha hay?adda waxaa lagu qiyaasaa tiro dhan 35,000 oo qof. Shaqooyinka ay u xilsaaran tahay hay?addaan oo aad u fara badan waxaa ka mid ah inay ilaaliso xudduudaha waddanka, in ay sharci d
RUMAYSO AMA HARUMAYSAN
Dadka maraykanka ahi waxay ka sheekeeyaan arrin ay aad ula yaabeen oo ahayd.
In labadii madax weyne ee maraykanka ee la kala oran jirey Abraham Lincoln iyo John F. Kennedy ay wax badan isaga mid ahaayeen, bal ila akhri arintaas.
Lincoln waxaa Congress ka Maraykanka loo doortay
FANKA IYO FANAANKA - WARAYSI : LUUL JEYLAANI CALI
Luul Jeylaani Cali ( Luula) waxaa ay ka mid tahay fannaaniinta Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel gaar ahaan fanka banaadiriga oo ay muddo fog ku soo dhex jirtay iyada oo waliba qayb wayn
SOOMALIDA QURBAHA: CARRUURTA QURBAHA KU KORTA AF SOOMAALI MA U BAAHAN YIHIIN?
Mudadii Soomaaliya Burbursanayd dad aad u fara badan oo Soomaali ah ayaa Qurbaha soo aaday. Caruurtii iyaga oo da\_' doodu yar yar tahay Qurbaha la keenay ama kuwii ku dhashay Qurbaha ayaa luqaddii af Soomaaligu ka sii suulaysaa. Waxaa is waydiin
Tartankii ciyaaraha dugsiyada ee K/ koleyga oo la soo gabagabeeyay.
MAXAA KU CUSUB MAGAZINE-KA?
Waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa dadka nala soo xiraara oo talooyinka na soo siiya.
Magazine-ka waxaa bishaan ku cusub laba qaybood oo kale ah
1)	Rumayso ama ha Rumaysan: Waxaan ku soo gudbin doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo arrimo la yaab leh oo aad xiiso u
Qaybihii hore waxaan la soconay Ayaan iyo Faysal oo akhbaar kala helay, kaddib markii ay in badan kala maqnaayeen. Ayaan oo Australia ku nool wadaad ah, xaas ah, hooyo ah, nin wadaad ahina qabo, nolosha ay ku nooshahay aan ku faraxsanayn. Faysal oo USA ku nool, balwad ye
DIINTA - WAYDIIN & WARCELIN: SU\_'AALIHII BISHAAN
Marka koowaad waxaan mahad balaaran u soo jeedinaynaa dadkii su?aalaha noo soo diray. Marka labaad waxaan ka cudur daaranaynaa su?aalaha aanaan ka soo jawaabin sababtuna waa iyada oo lagu maqan yaha jawaabaha iyo iyada oo ay qayb ka mid ahi u baahan yihiin cilmi baaris. Waxaan ku talo jirnaa in a
DHACDO RUN AH: QABIIL BAA DUMIYAY QOYSKAYGII
Waxaan ka cudurdaarnaynaa in ayan noo suurto galin in aan soo gudbino dhacdadii runta ahayd ee \_"Qabiil baa dumiyay Qoyskayga.\_" caddadkeedii bishan. Waxaanu leenahay dadka ku xirnaa sheekaday naga raali noqda bishan.